Udinga ukwazi malunga ne-Lorcaserin HCL powder | AASraw abaphakeli
/Blog/Lorcaserin HCL/Izinto ze-20 ezibaluleke kakhulu Ufuna ukwazi nge-Lorcaserin HCL powder
ezaposwa ngomhla 04 / 09 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Lorcaserin HCL. Ibe 1 Comment.
Yonke into malunga ne-Lorcaserin HCL powder
1.Iliphi i-Lorcaserin hydrochloride powder?
2.Lorcaserin i-HCL powder (Belviq)
3. Ngubani ongathatha i-Lorcaserin HCL powder (Belviq)?
4. Ngubani ongafanele athathe i-Lorcaserin HCL powder?
I-5. I-Lorcaserin hydrochloride powder isebenza njani?
I-6.I-powcaserin hydrochloride ifowuni kufuneka isetyenziswe njani?
7.Ungathabatha njani i-Lorcaserin hydrochloride powder ngokulahleka kwesisindo?
I-8.Lorcaserin I-HCL ipowder benefits
9.Kuphi i powdererin HCL powder?
11. I-Lorcaserin HCL powder Isexwayiso
I-12.Iphi i-Lorcaserin HCL powder ephephile?
I-13.Lorcaserin I-HCL ipowder Effects Side and Risks
14.I-powcaserin HCL powder powder (Belviq) 'High' kunye noNyango
15. Ukukhulelwa kunye ne-Lorcaserin i-HCL powder powder (i-Belviq)
16.Lorcaserin HCL Ukusebenzisana kwePowder
17.Lorcaserin HCL powder Ukusebenzisana kokutya
18. I-Lorcaserin HCL powder Izicwangciso
19.Kutheni kuthatha ixesha elide ukufumana isicatshulwa esitsha sokulahlekelwa kwesisindo?
20. Thenga i-Lorcaserin HCL powder
Lorcaserin hydrochloride powder ividiyo
IRaw Lorcaserin I-HCL ipowder powder Iimpawu:
1.Yintoni Lorcaserin hydrochloride powder?
I-Lorcaserin hydrochloride powder ithinta iimpawu zamakhemikhali kwingqondo elawula ukutya. I-Lorcaserin hydrochloride powder isebenza ngokukunceda uzive ugcwele ukutya okuncinci. I-Lorcaserin hydrochloride powder isetyenziselwa kunye nokutya kunye nokuzivocavoca ukuphatha ukukhuluphala. Ngamanye amaxesha i-Lorcaserin hydrochloride powder isetyenziselwa ukuphatha ukukhuluphala okunokuthi ihlobene nesifo sikashukela, i-cholesterol ephezulu, okanye uxinzelelo lwegazi oluphezulu. I-Lorcaserin hydrochloride powder ayiyi kunyanga nayiphi na imeko yezempilo (njengentliziyo yesifo, isifo sikashukela, uxinzelelo lwegazi). Qhubeka uthatha nayiphina imithi ugqirha ugqirha ukunyanga le miqathango.I-corcaserin hydrochloride powder ingasetyenziselwa iinjongo ezingaboniswa kule khowudi yeyeza.
2. I-Lorcaserin HCL powder (i-Belviq)
I-Lorcaserin HCL powder, igama lomthi: iBelviq, izithako eziphambili: i-Lorcaserin HCL powder, esetyenziselwa kunye nokutya kunye nokwakhiwa komzimba ukunyanga ukukhuluphala, ukwenzela ukulahlekelwa yintlungu. Ngamanye amaxesha kunikezwa ngamachiza ukunyanyisa okuhambisana ne-cholesterol ephakamileyo, uxinzelelo lwegazi okanye uhlobo lwe-2 sikashukela.rrug lorcaserin kwinqanaba leziyobisi ezibizwa ngokuba yi-serotonin receptor agonists. I-lorcaserin powder isebenza ngokujolisa kweekhemikhali kwingqondo echaphazela ukutya.
3. Ngubani ongathatha I-Lorcaserin HCL powder ( Belviq)?
I-FDA ivumile iyeza kumntu ogqithiseleyo (kunye nesalathisi somzimba, okanye i-BMI, ye-30 okanye ngaphezulu) okanye ngubani ogqithiseleyo (kunye ne-BMI ye-27 okanye ngaphezulu) kwaye ubuncinane ubunzima obunzima obunjalo njengohlobo lwe-2 yesifo sikashukela, uxinzelelo lwegazi oluphezulu okanye i-cholesterol ephezulu.
• I-Lorcaserin i-HCL ipowder ingaphunyezwa ngotata kamama, ngoko kuyacetyiswa ukuba uyeke ukusetyenziswa kwayo okanye ungaqalisi unyango ngexesha loongikazi.
• Abagulayo abanesifo se-serotonin okanye i-neuroleptic syndrome.
• Izigulane eziye zaphazamisa izivalo zentliziyo.
• Iziguli ezixinezelekile kakhulu.
• Izigulane kwizilwanyana ezichasene nesifo sikashukela okanye abo bafumana amaqabunga e-sugar episodes aphantsi ngokukhawuleza ngenxa yemithi yokulwa nesifo sikashukela.
• Izigulane ezithatha ukuxhaswa, i-erection ephakamileyo kwipenis ehlala ngaphezu kweeyure ze-4, kufuneka inqabe ukusetshenziswa kwe-Lorcaserin HCL powder.
5. Ingaba kwenzeka njani I-Lorcaserin hydrochloride powder isebenza?
(1) Indlela yokusebenza - i-Lorcaserin hydrochloride powder
I-Lorcaserin hydrochloride powder isebenza ngokulawula isondlo - ngokukodwa ngokusebenzisa i-brain receptors ye-serotonin, i-neurotransmitter eyenza ukuvakalelwa nokunyaniseka. Ukungena kokutya kulawulwa yiziko elixhasayo, elisekliniki ye-hypothalamus kunye nendawo elambileyo ekhoyo kwi hypothalamus yangaphambili. Iziphumo ezivela kumaziko aphezulu kunye namaphepheni omzimba ziguqula i-nucleus, apho kukho iintlobo ezimbini ze-neurons ezilawula ukutya okukhoyo. Okokuqala, iqela lokuvuselela ukutya lokuvelisa iprotheni ehlobene ne-agouti kunye neuropeptide Y; kwaye okwesibini, iqela lokutya lokutya eliqukethe i-cocaine kunye ne-amphetamine ilawulwa ngokubhaliweyo (IPART) kunye ne-pro-opiomelanocortin (POMC) neurons. I-POMC iqulethe i-5-HT i-2C receptors, xa isebenze ikhupha i-hormone ye-alpha-melanocyte-stimulating hormone (alfa-MSH) .Iimpawu ze-inhibitory ne-stimulatory neurons zenza iiprojekitiyali zeplastiki kwi-hypothalamus. I-nucleus iqukethe i-melanocyte i-4 receptors (MC4R) evimbela ukutya i-lorcaserin iyenziwa njenge-5-HT 2C agonist kwi-POMC neurons, leyo eyenza ikhululwe i-alfa MSH. I-alfa eqhubekayo i-MSH isebenza kwi-MC4R kwi-nucleus ephambili kwinqanaba le-hypothalamus, ekhokelela ekunciphiseni ukutya. Kwizidakamizwa ze-supratherapeutic, i-lorcaserin yenza kwakhona kwi-5-HT 2B kunye ne-5-HT 2A receptors.
I-Lorcaserin hydrochloride ixutywa ngokukhawuleza kwiphepha lesisu kwaye ilibaziseka ngokutya okunamafutha. Uxinzelelo lweplasma ye-Peak ifumaneka kwi-1.5-2 h, ne-half-life of 11h. Isatshalaliswa ngokufanayo kwi-cerebrospinal system ye-nervous system. I-Lorcaserin hydrochloride yi-70% yeprotheni ye-plasma eboshwe kwaye isetyenziselwe kwisibindi, kunye ne-metabolite enkulu i-lorcaserin hydrochloride sulfamate, kwaye i-excortion yayo iqukethe ikakhulukazi kumchamo (i-92%) kunye ne-excretion encinci ebusweni.
(3) I-Lorcaserin hydrochloride powder isebenza kwi-Obesity
I-lorcaserin hydrochloride isebenza ngokulawula isondlo-ngokukodwa ngokusebenzisa i-brain receptors ukuze i-serotonin, i-neurotransmitter edala ukuvakalelwa nokunyaniseka. I-Serotonin nayo ibandakanyeka kwimvakalelo; ezininzi izidakamizwa ezichasayo zisebenza ngokuthintela ukubuyiswa kwakhona kwe-serotonin kwaye kugcinwe i-brain receptors ehlaziyeni. Abaphandi kwi-Arena bathi izidakamizwa zabo zenzelwe ukufumana kuphela i-serotonin receptors ezichaphazela ukutya.
6. I-Lorcaserin hydrochloride powder kufuneka isetyenziswe njani?
I-Lorcaserin hydrochloride powder ifika njengetyulethi ukuthatha ngomlomo. Ngokuqhelekileyo kuthathwa ngokutya okanye ngaphandle kokutya kabini ngosuku. Thatha i-lorcaserin hydrochloride malunga namaxesha afanayo imihla ngemihla. Landela izikhokelo kwiileyibrari yakho ngokuchanekileyo, uze ucele ugqirha okanye umkhemisi wakho ukuba achaze nayiphi na into ongaziqondiyo. Thatha i-lorcaserin hydrochloride ngokuchanekileyo. Musa ukuthatha ngaphezulu okanye ngaphantsi okanye uthathe ixesha elide kunokuba umiselwe ugqirha wakho.
I-Lorcaserin hydrochloride ingaba ngumkhwa. Musa ukuthatha idosi enkulu, thabatha rhoqo, okanye uthathe ixesha elide kunokuba ligunyaziswe ngugqirha wakho. Ukuba awuyi kulahlekelwa ubunzima obuthile kwiiveki zokuqala ze-12, akunakwenzeka ukuba ukuba uya kuzuza ngokuthatha i-lorcaserin hydrochloride. Ugqirha wakho unokukuxelela ukuba uyeke ukuthatha i-lorcaserin hydrochloride ukuba awulahlekelwa bunzima ngokwaneleyo kwiiveki zokuqala zonyango lwe-12.
I-Lorcaserin hydrochloride iya kunceda ukulawula ubunzima bakho kuphela xa uqhubeka uthabatha. Ungayeki ukuthatha i-lorcaserin hydrochloride ngaphandle kokuthetha nogqirha wakho. Yenza i-pharmist okanye ugqirha wakho ikopi yenkcazelo yomenzi wesigulane.
7. Ndingathabatha njani I-Lorcaserin hydrochloride powder yokulahleka kwesisindo?
(1) Ngaphambi kokuba uthathe i-Lorcaserin hydrochloride powder
Akufanele uthabathe i-lorcaserin hydrochloride ukuba unomdla. Musa ukuthatha i-lorcaserin hydrochloride ukuba ukhulelwe. Ukunciphisa ukulahleka ngexesha lokukhulelwa kungalimaza umntwana ongakazalwa, nokuba ukhuluphele. Tshela ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba ukhulelwe ngexesha lonyango.
Ukuqinisekisa ukuba i-lorcaserin hydrochloride ikhuselekile kuwe, xelela ugqirha ukuba unayo:
• Ukungaphumeleli kwenhliziyo;
• i-valve heart disorder;
• imeko yeentliziyo ezifana ne "AV block" (i-2nd okanye i-3rd degree);
• i-anemia yesalente yesifo;
• i-leukemia okanye i-myeloma;
• isifo okanye isifo sesibindi; okanye
• ukukhubazeka ngokomzimba wepenis (njengesifo sePeyronie).
Ayaziwa ukuba i-Lorcaserin hydrochloride powder iwela ebisi yobisi okanye ingaba inokulimaza umntwana oswele. Akufanele ukondliwe ngenkathi usebenzisa le mayeza. Ukuthatha i-Lorcaserin hydrochloride ayivunywanga ngumntu omncinane kuneminyaka eyi-18 ubudala.
(2) Lorcaserin hydrochloride powder ukusetyenziswa
Thatha i-Lorcaserin hydrochloride powder ngokuchanekileyo njengoko kuchazwe. I-Lorcaserin hydrochloride powder ifika kwifom yefomathi kwaye ithathwa kabini imihla ngemihla. Ukuba awuyi kulahlekelwa ubuninzi obunzima besonto lokuqala lwe-12 unyango lwakho, akunakwenzeka ukuba uya kuzuza ngokuthatha i-lorcaserin hydrochloride. Ayaziwa ukuba i-lorcaserin hydrochloride ikhuselekile kwaye isebenza kubantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-18. Ukuba ulahlekelwa umthamo, thabatha umthamo olahlekileyo ngokukhawuleza ukukhumbula. Ukuba iphantse i-dose elandelayo, weqa idosi ephosakeleyo uze uthathe umthamo wakho ozayo ngexesha eliqhelekileyo. Musa ukuthatha amayeza amabini e-lorcaserin hydrochloride ngexesha elifanayo.
(3) Umlinganiselo we-Lorcaserin hydrochloride powder
Landela zonke izikhokelo kwiileyibrari yakho yesigunyaziso. Ungathathi la mayeza kwixabiso elikhulu okanye elincinci okanye ixesha elide kunokucetyiswa. Ithebhulethi eqhelekileyo idlalwa ngamaxesha e-2 ngosuku. Ithebhulethi yokukhululwa ngokukhawuleza ithathwa kuphela kanye ngosuku. Landela imiyalelo yegqirha yakho.Ungagqithisi, ukuhlafuna okanye ukuphula ipilisi yokukhululwa. Yilungele ngokupheleleyo.
Ungathatha i-lorcaserin hydrochloride okanye ngaphandle kokutya.Ufanele ulahlekelwe ubuncinane kwi-5% yesisindo sakho sokuqala ngexesha leeveki zokuqala ze-12 zokuthatha i-lorcaserin hydrochloride kunye nokutya ukutya okukhalori. Biza ugqirha wakho ukuba awulahlekelwa ubuncinane i-5% yesisindo sakho emva kokuthatha i-lorcaserin hydrochloride kwiiveki ze-12. I-Lorcaserin hydrochloride inxalenye yenkqubo epheleleyo yokonyango equka ukutya, ukuzivocavoca, ukulawula ubunzima, kwaye mhlawumbi uvavanya ushukela wegazi. Landela ukutya kwakho, amayeza kunye nokusebenzisa izinto ngokuqhelekileyo.Susa kwindawo yeqondo lokushisa ngaphandle kwomswakama nobushushu.
Qaphela umlinganiselo weyeza elisebenzisiweyo kwibhotile nganye entsha. I-Lorcaserin hydrochloride yinto yokusetyenziswa kakubi kweziyobisi kwaye kufuneka uqaphele ukuba kukho na umntu osebenzisa iyeza lakho ngendlela engafanelekanga okanye ngaphandle kwemithi. Musa ukwabelana ngeLorcaserin hydrochloride kunye nomnye umntu. Gcina amayeza kwindawo apho abanye bengakwazi ukufikelela kuyo.
(4) I-Lorcaserin hydrochloride powder Ukugqithisa
Iimpawu zokugqithisa kakhulu zibandakanya iintlobo ezinzima zezinye iziphumo ezibekwe apha ngasentla. Ukuba ucinga ukuba ungaphezu kwexesha, qha ga mshelana neziko lokulawula ubuthi okanye igumbi lexakeka kwangoko. Ungangena kwiziko lokulawula ubuthi (800) 222-1222.
(5) Ilahlekile i-Loroseerin hydrochloride powder
Ukuba ulahlekelwa umthamo weBelviq, thatha ngokukhawuleza ukuba ukhumbule. Nangona kunjalo, ukuba lixesha elide malunga neli dose elilandelayo, weqa umthamo olahlekileyo kwaye uqhubeke neshedyuli yakho yamayeza rhoqo. Musa ukuphindaphinda kabini kwiiyithingi zokwenza omnye olahlekileyo.
(6) Yintoni okufanele ndiyiphephe ngexesha lokuthatha i-lorcaserin hydrochloride?
Eli gama lingaphazamisa ukucinga okanye ukuphendula kwakho. Qaphela ukuba uqhuba okanye wenze nayiphi na into efuna ukuba uqaphele. Musa ukuthatha nayiphi na imithi okanye i-product-loss-loss-loss products product without advice. Gwema ukuthatha umkhuhlane kunye nokubanda okanye ukunyanga kwamayeza xa usebenzisa i-lorcaserin hydrochloride.
8. Inzuzo yePowdererin HCL yefowder
Ubunzima bukhula kuba yintlupheko kumazwe afana ne-USA, i-UK kunye ne-Indiya. I1-3 Iiprojekthi ze-WHO ezenziwa ngu-2015, malunga nabantu abadala abayi-700 baya kuba nzima kakhulu kwi-clinic. I-4 Ubuninzi bubunzima bezempilo karhulumente, ngaphaya kokukhubazeka ngqo ukugqithisa ngokugqithiseleyo, kwaye kwandisa ingozi yezifo ezingapheliyo ezifana neengozi zengqondo, u-apnea wokulala, isifo sikashukela, isifo se-artery kunye nomhlaza. Kucacile ukuba ukunyamezela kuyingozi kakhulu, kubeka umthwalo omkhulu kwezoqoqosho kwiinkqubo zempilo.
Ubukhulu besibini bubangelwa yinto ebalulekileyo ekhuselekayo yokufa, okwesibini kuphela ukusetyenziswa kwecuba.6 Ubungqina bubonisa ukuba ukunciphisa ubunzima bunciphisa umngcipheko wezinto eziphathekayo kunye nokukhuthaza ulawulo lwazo lwezonyango.7, 8 Nangona uphando lwe-bariatric luye lwavela njengeyona ndlela ukwenzela ukunciphisa ubunzima bomzimba kubantu abanobunzima obukhulu (ubunzima bomzimba buninzi (BMI) ≥40) okanye abo abangenakulawulwa ngenye indlela, i-9 yinkqubo enomngcipheko kakhulu enobungozi obukhulu.10, 11 Kule ndlela, unyango lokuziphatha, indlela yokuphila ukuguqulwa kunye ne-pharmacotherapy zihlala zingundoqo zonyango. Isisombululo esichukumisayo ngakumbi kuluntu ngokubanzi siza kuba "isisindo sokulahlekelwa kwesisindo". Kukho iintlobo ezininzi zesisindo sokulahlekelwa kwesisindo, njenge sibutramine, orlistat, cetilistat ... njl. I-Lorcaserin i-HCL powder yenye yeyona ndlela ixhaphakileyo yokusetyenziswa kweziyobisi.
-I-powdererin HCL powder isetyenziselwa kunye nokutya kunye nokuzivocavoca ukuphatha ukukhuluphala.
I-Lolcaserin HCL powder ngamanye amaxesha isetyenziselwa ukunyanyisa ukukhuluphala okunokuthi idibene nesifo sikashukela, i-cholesterol ephezulu, okanye uxinzelelo lwegazi oluphezulu.
-I-powdererin HCL powder ayiyi kunyanga nayiphi na imeko yezempilo (njengentliziyo yesifo, isifo sikashukela, uxinzelelo lwegazi).
9. I-powcaserin HCL iphambili kangakanani?
I-Lorcaserin HCL, isetyenziselwa ukudibanisa nokutya kunye nokuzivocavoca, kubangela ukulahleka kwexabiso elingu-12.9 lb (5.8 kg) xa kuthelekiswa ne-5.6 lb (2.5 kg) kunye ne placebo.3 Ngokomyinge, malunga ne-47% yezigulane ziya kulahla ubuncinane i-5% ubunzima bomzimba wabo (malunga ne-11.1 lb [5 kg]) xa kuthelekiswa ne-23% yezigulane ezitholayo indawobo (inombolo efunekayo yokuphatha [NNT] = 4) .1-3 Nge-22% yezigulane ziya kulahla ubuncinane i-10% yomzimba wabo ubunzima no-9% yezigulane ezifumana indawobo (NNT = 7). Ukulahleka kobunzima kugcinwe, ngokuqhelekileyo, iminyaka emibini. Ukulahleka kwesisindo kubakho kwangaphambili, kwaye abo abangalahlekelwa yi-5% yesisindo somzimba zabo kwiinyanga ezintathu zokuqala akunakwenzeka ukufezekisa i-5% ukulahlekelwa ngamaviki e-52. Ukulahlekelwa kwesisindo kubonakala kwizigulane ezine-type 2 zesifo sikashukela ezingathathi i-insulin, nangona kungenanqanaba elifanayo.4 Ukumisa i-lorcaserin i-HCL emva komnyaka omnye kubangela inzuzo yesisindo esiphezulu ngaphakathi kwe-2.2 lb (1 kg) yesiseko.1- 3 Akukho uphando malunga nomphumo we-lorcaserin HCL ngokufa, isifo sesifo sikashukela, okanye ezinye iziphumo ezijoliswe zizigulane.
Isifundo sibonisa, malunga nesiqingatha se-dieters esithatha i-lorcaserin i-HCL yonyaka kwisifundo esilahlekile ubuncinane i-5% yesisindo somzimba, xa kuthelekiswa ne-20% ye-dieters eyithatha ipilisi ye-placebo. Phantse kwi-five lorcaserin abasebenzisi be-HCL balahlekelwa i-10% okanye ngaphezulu komzimba wabo, xa kuthelekiswa nomnye wabasebenzisi be-placebo be-14. Abantu abaqhubekayo kwiziyobisi iminyaka emibili bakwazi ukugcina ukulahleka kwabo bunzima kunokuba batshintshwe kwi-placebo emva komnyaka omnye, umphandi uSteven R. Smith, MD, wase-Florida Hospital kunye neSanford-Burnham Institute uthi kuWebMD.
10. I-Lorcaserin HCL powder Overview
I-Lorcaserin i-HCL powder yile mithi yonyango esetyenziselwa ukunceda abantu abadala abakhulu okanye abanomzimba ogqithiseleyo kwaye baneengxaki zonyango ezinxulumene nesisindo sokunciphisa umzimba kwaye bahlale bengagcini. I-Lorcaserin i-HCL powder kufuneka isetyenziswe kunye nokunciphisa ukondla kwekhalori kunye nesicwangciso sokusebenzisa. Xa uthengela ukucoceka okukhulu kweLorcaserin HCL powder Ukulahleka kwe-Fat Lorcaserin i-HCL powder kudidi lweemithi ezibizwa ngokuthi i-serotonin receptor agonists. I-Lorcaserin HCL powder isebenza ngokunyusa iimvakalelo zokuzaliseka ukuze kudliwe ukutya okuncinci.
Leliyeza liza kwifom yefowuni kwaye ithathwa ngamaxesha e-1-2 ngosuku, okanye ngaphandle kokutya.Iziphumo zempembelelo zeCommcaserin HCL powder ziquka intloko yesifo, isicupunu, kunye nentlungu. I-Lorcaserin i-HCL powder ingabangela ishukela ephantsi yegazi (u-hypoglycemia) kwizigulane ezineesifo sikashukela.I-powcaserin HCL powder inganciphisa ukucinga kwakho kwaye ibangele ukungcola. Musa ukuqhuba imoto okanye usebenzise umatshini ogqithiseleyo uze wazi ukuba i-Lorcaserin HCL powder ikuchaphazela njani.
11. I-Lorcaserin HCL powder Izilumkiso
Esi siza kufuneka sisetyenziswe kunye nesicwangciso sokutya kunye nesicwangciso sokuzilolonga. Ungayeki ukuthatha i-Lorcaserin HCL powder ngaphandle kokuqala ukuthetha nodokotela wakho. Ngaphambi kokuba uthathe i-Lorcaserin HCL powder, kufuneka uxelele ugqirha wakho ukuba unayo okanye uke wabakho:
• Iingxaki zeseli zegazi njenge-anemia ye-sickle cell, i-myeloma ezininzi, okanye i-leukemia
• Ukukhubazeka ngokomzimba wepenis, njengesifo sikaPeyronie
• Ukumelwa yintliziyo
• Intliziyo esicothayo okanye engaqhelekanga
• Ezinye iingxaki zentliziyo
• Isifo sesibindi
• Izifo zesifo
Ufanele uxelele ugqirha wakho ukuba uthathe i-Lorcaserin HCL powder phambi kokuba ube naluphi na uhlobo lotyando, kubandakanywa nenqubo yamazinyo. Akufanele uthathe nayiphi na imithi okanye i-counter-counter-counter-counter uthetha nogqirha wakho.
Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza owathathayo ngaphambi kokuba uqale nge-Lorcaserin HCL powder, ngokukodwa iziyobisi ukunyanga uxinzelelo, i-migraines, iingxaki zengqondo, okanye ubanda obuqhelekileyo. Ezi zonyango zingabangela ingxaki engathí sina okanye esichengeni ubomi xa idibene neLorcaserin HCL powder. Ukulahleka kwesisindo kunokubangela ishukela eliphantsi kwegazi kubantu abathatha amayeza athile ngohlobo lwe-2 yesifo sikashukela. Ukuba unesifo sikashukela, jonga amanqanaba eeshukela egazini kaninzi ngelixa uthatha iLorcaserin HCL powder. Ugqirha wakho unokufuna ukutshintsha amanani amachiza akho ukuba uhlakulele ishukela ephantsi yegazi. I-Lorcaserin HCL powder ayikwazi ukuba yinzuzo kuwe. Ukuba awulahlekelwa ubuncinci beepesenti ze-5 zokuqala kwesisindo sakho kwiiveki zokuqala zonyango ze-12, ugqirha wakho unokukuxelela ukuba uyeke ukuthatha i-Lorcaserin HCL powder.
Kufuneka ugcine zonke izikhundla kunye nogqirha wakho kunye nelabhoratri ngelixa uthatha i-Lorcaserin HCL powder. Ugqirha wakho mhlawumbi uya kuyala iimvavanyo ezithile ukujonga impendulo yomzimba wakho kwisiza.
12. Ngaba i-Lorcaserin HCL powder iphephile?
Xa kuziwa ukuvuma amachiza amatsha, umba wokukhusela ngowokuqala ukuwuqwalasela kwaye ngokuqhelekileyo unesizathu esinye sokuhlawula isilwanyana esitsha. I-Lorcaserin i-HCL powder yenye yezona zimbalwa zonyango zokunciphisa umzimba ezivunyiwe yi-Food and Drug Administration (FDA). Kodwa ngaba ithetha ukuba i-100% iphephile?
Nayiphina imishanguzo enzulu ingabangela iziphumo ezibi kunye nezimpembelelo ezimbi. Umzimba wakho uyingqayizivele kwaye ungasabela kwiimveliso kwiyeza, ngelixa omnye umntu engenzi, okanye ukuba kunjalo, ngoko kwimeko elula kakhulu. Ezinye zezi mpendulo zinokuqikelelwa, ngokukodwa kwiimeko xa izigulane zinemeko ethile yempilo, njengesifo senhliziyo okanye isifo sikashukela. Abanye bangatshintsha ukusuka kwimeko ukuya kwimeko. I-Lorcaserin HCL powder ngokuqinisekileyo ineempembelelo, nangona kunjalo, nokuba uya kubafumana okanye akunjalo kuxhomekeka kwizinto ezininzi. Ziquka ubudala (abantu abadala kakhulu banomdla ongaphezulu, kunezigulane ezincinci), ubunzima bunjani, nokuba ungowesifazana okanye umntu, kunye nezinye iingxaki zempilo (uhlobo-2 sikashukela, uxinzelelo lwegazi oluphezulu (uxinzelelo lwegazi), oluphezulu I-cholesterol yeLDL kunye nabanye).
Ezinye iziphumo zempembelelo ze-Lorcaserin HCL zikhanya kwaye zibhekwa njengincinci, apho iimeko zokuthatha i-Lorcaserin HCL ye-powder-loss loss loss exceed the reaction. Kwezinye iimeko, ukunyamezela iziphumo ezichaphazelekayo (ezinzima kakhulu) zingenobungozi kwimpilo yakho, ngoko ke ukuba uyazifumana, kufuneka uqhagamshelane nogqirha ngokukhawuleza okanye uye kwindlu egxininisayo.
13. I-Lorcaserin HCL ipowder Side Iziphumo kunye neengozi
Ngokutsho kwe-FDA, iimpembelelo eziqhelekileyo ze-Lorcaserin HCL powder ziquka intloko, isisu, ukukhathala, isisonguluko, umlomo owomileyo kunye nokuqhaqha. Kwizigulane zesifo sikashukela, iziphumo eziphantsi kwegazi ushukela wegazi ophantsi (u-hypoglycemia), intloko yesifo, intlungu emva, ukukhwehlela kunye nokukhathala. Iziko leZiko lezeMpilo libonelela uluhlu olupheleleyo lweempembelelo ezifanele ukuvavanya nokuxoxisana nodokotela wakho phambi kokuba uthathe amayeza. Isilwayo asivunyelwanga nezigulane eziye zafumana impendulo kwi-Lorcaserin HCL powder okanye nakweyiphi na imveliso yecandelo elidlulileyo.
Kwimigangatho yokuqala yokuvavanya, abaphandi babenenkxalabo malunga neengqondo zomzimba kwizigulana ezithatha i-Lorcaserin HCL powder powder. Kodwa i-FDA sele iqaphele ukuba isilwanyana asinakwenzeka ukuba kubangele iingxaki zentliziyo ye-valve ezaphambili kwizifundo zakuqala. Nangona kunjalo, i-Lorcaserin HCL powder powder ayizange ifundwe kwizigulane ezinezifo zentliziyo ye-valvular kwaye i-FDA ikhuthaza ukuba izigulane ezinokukhubazeka kwentliziyo ziqaphele xa zithatha amayeza.
Ukongezelela, ngokutsho kweNew England Journal of Medicine kukho ukuxhalabisa ukuba izidakamizwa zingaphatha ingozi yeengxaki zengqondo okanye yengqondo, ingakumbi kubantu abathatha imithi ethile. Ngokutsho kwe-FDA, abasebenzisi be-Lorcaserin HCL powder bangabandakanya i-serotonin syndrome, ingakumbi xa kuthathwa ngamachiza okwandisa amazinga e-serotonin okanye asebenze i-serotonin receptors. Ezi ziquka imishanguzo esetyenziselwa ukuphatha ukudakumba kunye neentloko ze-migraine. I-Lorcaserin i-HCL powder powder ingakhokelela nokuphazamiseka kwingqalelo okanye kwimemori.
14. I-Lorcaserin HCL powder (iBelviq) 'Ephakamileyo' kunye nokuShatshazwa
La mayeza angenza umkhwa kwaye angabangela ukuxhomekeka kweengqondo.Izidanga ze-Lorcaserin HCL powder powder zingenza i-hallucinations okanye "ukuphakama". Ungalokothi uthathe ngaphezulu kweziyobisi okanye uthathe ixesha elide kunokuba ugqirha wakho ubeka umthetho. I-Horscaserin HCL powder powder iyinto elawulwa ngumbutho ngenxa yokuba inokubangela ukusetyenziswa kakubi okanye ukuxhomekeka kweziyobisi. Kwi-2013, uLawulo loLawulo lweDrug (UAA) lubekwa i-Lorcaserin HCL ipowder powder njengeShedyuli IV ngaphantsi koMthetho woLawulo lweMithi. Awufanele ukwabelana nalo myeza nomnye umntu.
15. Ukukhulelwa kunye neLorcaserin HCL powder (iBelviq)
I-Lorcaserin HCL powder powder ingalimaza umntwana ongakazalwa. Tshela ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba ukhulelwe okanye ucwangcise ukuba ukhulelwe ngelixa uthabatha eli liyeza. Ukunyuka kwesisindo ngexesha lokukhulelwa kungalimaza kumntwana, nokuba ukhuluphele. Ayaziwa ukuba le nkunkuma idlula ubisi lwebele okanye ukuba inokulimaza umntwana osondezayo. Akufanele uncelise ilungu ngelixa uthabatha i-Lorcaserin HCL powder powder.
16. Lorcaserin HCL Ukusebenzisana kwephunga
Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza owathathayo, kuquka amachiza angagunyazisiyo kunye nongavunyelwayo, amavithamini, kunye nezongezelelo zemfuyo. Xelela ngokugqithiseleyo ugqirha ukuba uthetha:
• i-triptans, esetyenziselwa ukunyanga imigraines, njenge-sumatriptan (Imitrex, Treximet), eletriptan (Relpax), almotriptan (Axert), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), i-rizatriptan (Maxalt), kunye ne-zolmitriptan (Zomig)
• i-monoamine oxidase inhibitors njenge-isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), i-tranylcypromine (Parnate), i-selegiline (i-Emsam, i-Eldepryl, i-Zelapar), i-rasagiline (i-Azilect)
• i-tricyclic antidepressants ezifana ne-trimipramine (i-Surmontil), i-amitriptyline (i-Elavil), i-nortriptyline (i-Pamelor, iAventyl), i-protriptyline (i-Vivactil) kunye ne-clomipramine (i-Anafranil)
• i-serotonin i-reuptake inhibitors (i-SSRIs) efana ne-escitalopram (Lexapro), i-sertraline (i-Zoloft), i-citalopram (iCelexa), i-paroxetine (Paxil), i-fluoxetine (i-Prozac, i-Sarafem) kunye ne-fluvoxamine (i-Luvox)
• i-serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (i-SNRIs) njenge-venlafaxine (Effexor), i-duloxetine (i-Cymbalta), ne-Pristiq (desvenlafaxine)
• iSt John's Wort
• i-lithium (iLithobid)
• ubuqili (Wellbutrin)
• imishanguzo esetyenziselwa ukuphathwa kakubi kwe-erectile
Olu alukho uluhlu olupheleleyo lwe-Lorcaserin HCL yokusetyenziswa kwezidakamizwa. Buza ugqirha wakho okanye umsemistri ngolwazi olungakumbi.
17. I-Lorcaserin HCL powder Ukusebenzisana kokutya
Amachiza angakwazi ukusebenzisana nokutya ezithile. Kwezinye iimeko, oku kunokuba yingozi kwaye ugqirha wakho unokukucebisa ukuba ugweme ukutya okuthe ngqo. Kwimeko ye-lorcaserin i-HCL, akukho nto yokutya okumele uyifake ngaphandle kokutya kwakho xa ufumana le mayeza.
Imiphumo emibi yecala laseLorcaserin HCL iye yabikwa kunye ne-Lorcaserin HCL powder kubandakanya oku kulandelayo:
A: I-Serotonin Syndrome okanye i-Neuroleptic Malignant Syndrome (i-NMS) njengeempendulo. Tshela umboneleli wakho wezempilo ngokukhawuleza ukuba unayo okanye zonke ezi zilandelayo:
• utshintsho lwengqondo olunjengokuphazamiseka, ukuguquka, ukudideka, okanye ezinye iinguqu kwisimo sengqondo
• iingxaki zokuququzelela, ukungabikho kwemisipha engalawulwayo, okanye ukuxubha kweemisipha (iingcamango ezingapheliyo)
• ukugijima okanye ukubetha kwentliziyo ngokukhawuleza, uxinzelelo oluphezulu okanye oluphantsi lwegazi
• ukukhupha okanye umkhuhlane
• isicongconi, ukuhlanza okanye urhudo
• ukuqina komzimba (imisipha eqinile)
B: Isifo senhliziyo yeValvular. Abanye abantu bathabatha imithi enjengeLorcaserin HCL powder baye babe neengxaki kwiigraves entliziyweni yabo. Tshela umboneleli wakho wezempilo ngokukhawuleza ukuba unayo okanye zonke ezi zilandelayo:
• ukuphefumula ukuphefumula
• ukuvuvukala kweengalo, imilenze, amaqaqa, okanye iinyawo
• utywala, ukukhathala, okanye ubuthathaka obuya kuhamba
• intliziyo esheshayo okanye engavumelekanga
C: Utshintsho kwingqalelo yakho okanye kwimemori.
D: Iingxaki zeengqondo. Xelela ugqirha ukuba uyaphawula:
• uzive ephakamileyo okanye enomdla kakhulu (euphoria)
• iimvakalelo zokuma eceleni kwakho okanye ngaphandle komzimba wakho
E: Ukucinezeleka okanye iingcinga zokuzibulala. Naka ingqalelo nayiphi na inguqu yengqondo, ingakumbi utshintsho olushushu, kwimeko yakho, ukuziphatha, iingcamango okanye iimvakalelo. Shayela umnini-nkonzo wakho wezempilo ngokukhawuleza ukuba unayo nayiphi na inguqu yengqondo entsha, eyingozi, okanye ikukhathaze.
F: Ishukela eliphantsi kwegazi (u-hypoglycemia) kubantu abane-2 isifo sikashukela esine-diabetes mellitus nabo bathabatha unyango, njenge-insulin okanye i-sulfonylureas, esetyenziselwa ukhathaza uhlobo lwe-2 yeswekile yesifo sikashukela. Jonga ishukela legazi ngaphambi kokuba uqale i-Lorcaserin HCL powder kwaye ngexesha lonyango lwakho kunye ne-Lorcaserin HCL powder.
H: Erections pain (priapism). I-Lorcaserin i-HCL ipowder ingabangela izilungiso ezibuhlungu ezidlula iiyure ze-6. Ukuba une-erection ehlala ngaphezu kweeyure ze-4 nokuba ibuhlungu okanye ayikho, yeka ukusebenzisa iPowcaserin HCL powder uze ubizele ugqirha wakho okanye uye kwigumbi eliphuthumayo elisondeleyo kwangoko.
I: Iphule intliziyo. Tshela ugqirha wakho ukuba unembali yentliziyo yakho ukubetha i-slow or heart block.
Ukunciphisa ukubalwa kweeseli zegazi. I-Lorcaserin i-HCL ipowder inokubangela ukuba iseli lakho elibomvu nelomhlophe libale ukuhla. Ugqirha wakho angenza iimvavanyo ukujonga ukuba igazi lakho libala ngelixa uthatha i-Lorcaserin HCL powder.
J: Ukwanda kweprolactin. Tshela ugqirha wakho ukuba amabele akho aqale ukwenza ubisi okanye ukukhutshwa kwamathambo okanye ukuba uyindoda kwaye amabele akho aqala ukwandisa ubungakanani.
I-Lorcaserin i-HCL ipowder inganciphisa ukucinga kwakho kwaye ibangele ukungcola. Musa ukuqhuba imoto okanye usebenzise umatshini ogqithiseleyo uze wazi ukuba i-Lorcaserin HCL powder ikuchaphazela njani.
Musa ukuthatha i-lorcaserin HCL ukuba wena:
• iyancipha i-LORcaserin HCL okanye nayiphi na isithako sayo
• ukhulelwe okanye uceba ukukhulelwa
19. Kutheni kuthathe ixesha elide ukufumana isicatshulwa esitsha sokulahlekelwa kwesisindo?
Imbali yeepilisi zokutya ihlaselwe yiingxaki zokhuseleko. Ekubeni i-1999, xa isigxina sokugqibela semithi yokulahlekelwa kwemithi, i-Xenical (orlistat), yanikezwa ukukhanya okuluhlaza, isisifo sokulahlekelwa kwesisindo esisodwa, iMeridia (sibutramine) esuswe kwiimarike xa abasebenzisi beqala ukubonisa ingozi yeengxaki zentliziyo, kunye nabanye ababini , IBelviq kunye neQnexa, zafunyanwa yi-FDA malunga nokukhathazeka kokukhuseleko. Ukukhusela iindlela zomzimba zokulawula ubunzima kunokuba nemiphumo emide kwixesha lentliziyo kunye nezinye iinkqubo zokuxilonga, ngoko-ke abaphuhlisi beziyobisi banomtya ophezulu ukucacisa ukubonisa ukuba izixhobo zabo zikhuselekile.
(1) Thenga i-Lorcaserin HCL powder ukulahleka kwesisindo
Ukuthenga i-Lorcaserin HCL powder kunye nokubandakanya kwisicwangciso sakho sokulahlekelwa kwesisindo ingumzekelo omuhle kuphela kubantu abagqithiseleyo, okokuba - abantu abane-index body mass (BMI) 30 kunye nokunye. Ngamanye amaxesha oogqirha banika isigxina se-Lorcaserin HCL kwiigulane ezigqithiseleyo, kunye ne-BMI eqala kwi-27 nangaphezulu, kodwa kuphela xa benemeko ethile yempilo enxulumene nesisifo (njengesifo sikashukela okanye uxinzelelo lwegazi).
Kwi-2013 imishanguzo entsha yokulahlekelwa kwesisindo, i-Lorcaserin HCL powder, yavunywa yi-Food and Drug Administration (FDA), emva kwe-13 iminyaka engekho mthethweni yonyango yokunyanya ukunyanya. I-Lorcaserin HCL powder, kunye necebo elincinane le-calorie yokutya kunye nokuzivocavoca rhoqo, kunokukunceda ukufezekisa iziphumo ezintle ngokwemilinganiselo yokulahlekelwa kwesisindo kunye nempilo.
Ukulahleka kwesisindo somzimba we-Lorcaserin HCL powder kusekelwe kwicandelo elisebenzayo elibizwa ngokuthi i-Lorcaserin hydrochloride powder kwaye lidalwe kwaye lisasazwa yi-Arena Pharmaceuticals. I-Lorcaserin HCL powder ibhekiselwa kwi-serotonergic uhlobo lweziyobisi. Iyeza-serotonergic zisebenza ngokulawula amanqanaba e-serotonin (iikhemikhali efunyenwe emzimbeni) kwingqondo, apho idlala indima ye-neurotransmitter. Eyona nto ixanduva lokulala, ukutya, ukukhathazeka, isondo kunye nomsindo.
Kusenokwenzeka ukuba uvile ukuba lo mgaqo we-serotonin usetyenziselwa ukuphatha uxinzelelo. Nangona kunjalo, i-Lorcaserin HCL powder ihluke kwiintsholongwane ezichasayo ezifana ne-SSRI, kuba ijoliswe ngqo ekufunweni. Yenza i-serotonin cell cell receptors kwiindawo ze-hypothalam, ezijongene nokuziva zizele. Oko kuthetha ukuba ukutya kunciphisa, abantu banamava okutya okuncinane, bafumane ngokukhawuleza kwaye bahlale bezele ixesha elide. Oku kubonisa uncedo olungenakwenzeka kubantu abanobunzima bokunciphisa umzimba.
(2) Ixabiso le-Lorcaserin HCL powder
I-Lorcaserin i-HCL ipowder iye yafumaneka kwi-counter kwi-pharmacy kulo lonke i-USA ukususela ngo-Meyi 2013, emva kokuvuma kwe-FDA i-Lorcaserin HCL. Iindleko ze-Lorcaserin HCL powder zingabandakanywa ngokukodwa ngomshuwalense wakho wezonyango (ngamanye amaxesha ixabiso lilonke lihlanganisiwe). Kodwa oko kuxhomekeke kuhlobo lwe-inshorensi kwaye izigulane ezininzi kufuneka zisebenzise imali yazo ukuthenga i-Lorcaserin HCL powder.
Ixabiso leziyobisi lixhomekeke kwiindleko zokuphuhliswa kwayo, oko kukuthi, imfihlo yorhwebo. Sekunjalo, ezininzi iingcali zicinga ukuba uphuhliso lwe-Lorcaserin HCL powder luchaza inkampani ngaphezu kwe-1.5 yezigidi ze-US. Kukho ezinye izinto ezichaphazela iindleko ze-Lorcaserin HCL powder, njengokuqhuba iimvavanyo zangaphambili kunye nezonyango, ukuphuhliswa kwefom ekhethekileyo ngesiseko (i-Lorcaserin HCL powder), ukubhaliswa kweyeza, ukuphakanyiswa kwaye ekugqibeleni, iindleko zophando oluqhubekayo lweziyobisi. Kule miba, ukuqhutywa kophando kunye nokuhlolwa kweeklinikhi kuyona ebiza kakhulu, njengoko inkampani kwafuneka ihlawule umvuzo kubaphandi, nakwizigulane.
Ngoko, ucinga ukuba uphando kunye nezifundo kwi-Lorcaserin HCL powder ziye zadlulayo kwiminyaka eyi-10 ngoku (kwaye zisasebenza), akumangalisi ukuba ixabiso le-Lorcaserin HCL iphambili kakhulu, ingakumbi kuthelekiswa nezinye izilingo -ayeza amayeza atholakalayo ngaphambili kwimarike.
Nangona kunjalo, izinto ezichaphazela indleko ye-Lorcaserin HCL powder, ephakanyisiwe, ziqhelekileyo eziqwalaselwa xa zibeka ixabiso leyeza. Enyanisweni, ezininzi zazo zacatshangelwa, xa kuthengiswa i-Lorcaserin HCL powder. Kodwa ngenxa yokuba i-Arena Pharmaceuticals ayimemezeli ulwazi malunga nophuhliso lwe-Lorcaserin HCL, ayikwazi ukunika uluhlu oluchanekileyo lwezinto ezichonga intlawulo yalo. Ngoko ke, uhlolo olunikeziwe luphezulu lulingana nje, oluphakanyiswe yiingcali zorhwebo.
Kukhuselekile ukucinga ukuba ngaphandle kokuba ii-Arena Pharmaceuticals zithengise amalungelo e-Lorcaserin HCL yokuvelisa i powder kwelinye ikhampani, okanye kude kubekho izidakamizwa eziqhelekileyo ngokusekwa kwe-Lorcaserin HCL powder kuvela kwiimarike (okungenakwenzeka ukuba kwenzeke kule minyaka eyi-10 elandelayo. ), ixabiso lePalcaserin HCL yefowuni aliyi kuguquka. Ngoko nangona ezinye iinkampani ziza kuvelisa iinguqu ezincinci ze-Lorcaserin HCL powder, ukudala uhlobo oluthile lokuncintisana phakathi kweemveliso, intengo ye-original Lorcaserin HCL powder iya kuhlala ifana. Ngelishwa, oku kuthetha ukuba izigulane aziyi kukwazi ukufumana izibisi ngexabiso elincinci kusondele. Nangona kunjalo, kule meko, ixabiso le-100% lichanekile ngo mgangatho, ukuphumelela nokukhuseleko kwe-Lorcaserin HCL powder.
Ukususela ngoku, ixabiso le-Lorcaserin HCL ngefayili ye-10 mg ijikeleze i-3.50 yeedola zase-US. Ekubeni umyalelo oqhelekileyo ucebisa ukuthabatha isicatshulwa kabini imihla ngemihla, ukubonelelwa kweenyanga zeeplisi ze-60 kuya kuhlawula i-210 zeedola zase-US. I-Lorcaserin HCL powder nayo ikhona ngaphandle kwe-US, eYurophu, eCanada naseMexico. Nangona kunjalo, igama loshishino lingahluka, kuxhomekeke kwilizwe. Buza ugqirha wakho ukuba izilwanyana oceba ukuzithenga zifana neefayili ye-Lorcaserin HCL, ngaphantsi kwelinye igama legama.
(3) njani bathenge i-Lorcaserin HCL powder?
Unokuthenga kwakhona i-Lorcaserin HCL powder online, nangona kunjalo, qiniseka ukuba ukuthengwa kwenziwa kwintsika ethembekileyo kunye ne-Lorcaserin HCL umthengisi wefowuni. Iinguqu ezingekho mthethweni zale mziyo zikhuselekile kwaye zinokuba yingozi kwimpilo yakho. Unokuphinda ucele ugqirha wakho okanye umboneleli wezempilo ukuba akucebise umthombo onokwethenjelwa, ukuze ukwazi ukuthenga i-Lorcaserin HCL powder online ngoku.
Nantsi isincomo esinokwethenjelwa-I-AASraw, enkulu ekunikezeni ilahleko yokulahleka kwefayili.AASraw unikezela umgangatho ophezulu we-Lorcaserin HCL powder kwaye ubunyulu bungekho ngaphantsi kwe98% .Izinto ezintle ezivela kwi-AASraw njengalandelayo:
tags: bathenge i-Lorcaserin HCL powder, I-Lorcaserin HCL powder, Abaxhasi bee-powder i-Lorcaserin HCL, Lorcaserin hydrochloride powder
pahini shah08 / 31 / 2018 kwi-9: 36 ntambama
Ndingayigcina le powder kwi-degrees ze-37 njengoko ndiza kusebenza kwi-India kwaye kufuneka ndilungiselele ukuqulunqwa komsebenzi wam wophando.
njengoko izimo zokugcina zikhankanywe njenge -2 degees
Nandrolone Decanoate powder vs Nandrolone phenylpropionate powde	Iingcebiso zokusebenzisa i-Dobutramine Raw